निर्वाचनको बिरोध गर्दै आएको राजपाको स्वतन्त्र उम्मेदवारी ! - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
निर्वाचनको बिरोध गर्दै आएको राजपाको स्वतन्त्र उम्मेदवारी !
५ असार, कपिलवस्तु । निर्वाचनको बिरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका जिल्ला नेताले कपिलवस्तु नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर सहित वडास्तरमा स्वतन्त्र उम्मेदबारी दिएका छन । राजपा कपिलवस्तुका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य रामदास गुप्ताले नगर प्रमुख र नेता बासुदे गुप्ताले उपप्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदबारी दिएका हुन ।
पार्टीले वडास्तर सम्म नै उम्मेदबार तयार गरि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको हो । आन्दोलनले मधेसको माग पुरा हुने नदेखे पछि आफु निर्वाचनमा आएको नेता गुप्ताले बताए । निर्वाचन बिरोधका लागी गरिएको आन्दोलन उपलब्धीहिन रहेको उनले दाबी गरे । निर्वाचनमा सहभागी भएर पनि संबिधान प्रतिको असन्तुष्टी जनाउन सकिने उनको प्रष्टोत्ति छ । आफनो उम्मेदबारीले सहि भएको बताउदै त्यसले पार्टीमा कुनै असर नपर्ने उनले दाबी गरे ।
मनोनयन दर्ताको बिरोध गर्न सक्ने भन्दै प्रहरीले पार्टी केन्द्रिय सचिव रबिदत्त मिश्र, केन्द्रिय सदस्य मंगल प्रसाद गुप्ता, जिल्ला संयोजक कैलाश अग्रहरी सहित २५ बढि नेता कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । उता स्थानिय प्रशासनले शान्ति सुरक्षामा प्रतिकुल असर पर्न नदिन सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरेको छ ।
Previousभूकम्पपीडितको १८ अर्ब बैंकमै थन्कियो
Nextराजपा नेता महतोलाई पितृशोक